Ithegi: imephu yobushushu » Martech Zone
Ithegi: imephu yobushushu
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Kule minyaka yedijithali, idabi lokuthengisa indawo litshintshile kwi-intanethi. Ngabantu abaninzi kwi-Intanethi, imirhumo kunye neentengiso zisukile kwindawo yazo yemveli zaya kwidijithali yazo entsha. Iiwebhusayithi kufuneka zikwimidlalo yazo efanelekileyo kwaye zithathele ingqalelo uyilo lwesiza kunye namava omsebenzisi. Ngenxa yoko, iiwebhusayithi zibaluleke kakhulu kwiingeniso zenkampani. Ngenxa yale meko, kulula ukubona ukuba inqanaba lokuguqula ukusebenza, okanye i-CRO njengoko yaziwa njalo
IHotjar: Ubushushu, iiFunels, ukurekhodwa, uhlalutyo kunye nengxelo
NgoMgqibelo, nge-27 kaFebruwari ngo-2016 NgoMgqibelo, Julayi 8, 2017 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu IHotjar ibonelela ngeseti epheleleyo yezixhobo zokulinganisa, ukurekhoda, ukubeka esweni kunye nokuqokelela ingxelo ngewebhusayithi yakho kwiphakheji enye efikelelekayo. Yahluke mpela kwezinye izisombululo, iHotjar ibonelela ngezicwangciso ngezicwangciso ezilula ezifikelelekayo apho imibutho inokuthi ivelise ulwazi kwinani elingenamda lewebhusayithi- kwaye izenze zifumaneke kwinani elingenamda labasebenzisi. Uvavanyo lweHotjar Analytics lubandakanya ii-Heatmaps-ezibonelela ngokubonakalayo konqakrazo lwabasebenzisi bakho, iitephu kunye nokuziphatha okuskrola. Ukurekhodwa kwabatyeleli
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu I-EyeQuant yimodeli yokulandela umkhondo yamehlo ejonge ngokukodwa kubasebenzisi ababonayo kwiphepha ngaphakathi kwemizuzwana yokuqala ye-3-5. Umbono ulula: ngaphakathi kwemizuzwana emi-5 umsebenzisi uya kuba nakho ukubona ukuba ungubani, lithini ixabiso lesindululo sakho, kunye nokuba wenze ntoni ngokulandelayo. I-EyeQuant ivumela ukwenziwa koyilo lwephepha ukuqinisekisa ukuba kunjalo. Nazi iziphumo zasimahla zedemo yethu ye-EyeQuant… ndonwabile
Ngaba ubhalisile ukuSebenza?
NgoLwesibini, Septemba 13, 2011 NgoMgqibelo, Julayi 8, 2017 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Xa saphinda sayivula incwadana yethu, ndifuna ukwenza ikhonkco lobhaliso lube yeyona nto iphambili kwindawo yethu. Songeze icandelo lokuhla emazantsi esiza kwaye bekumangalisa. Ngelixa sasidla ngokufumana inkohliso yomrhumo omnye okanye ababini ngaphambili, ngoku sifumana uninzi lwababhalisi veki nganye. Incwadana yeendaba yeNtengiso yeTekhnoloji ikhula ithandwa kakhulu, iphantse yabhalisela i-3,000! Ndingathanda ukongeza okwehlayo okumbalwa
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Ndifumene inqaku kumnxibelelanisi (isihloko esikhulu) kuYooba.com, inkonzo esekwe kwiwebhu elungiselela ukumilisela lo Ntwasahlobo. Ividiyo iyimfihlakalo encinci kodwa umxholo okwisiza uyanyanzelisa: I-Yooba yinkonzo esekwe kwi-B2B yewebhu yeengcali zentengiso. Injongo yethu kukwenza ukuba ubenakho ukugxila kubuchule kunye nakwimpumelelo. I-Yooba ikunika iqonga elibandakanya konke kumava akho entengiso yedijithali. Sinikezela ngokubamba kunye nedatha